၁၅ နှစ်ဆက်တိုက် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် တီဗီထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် Samsung မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် UHD နှင့် Crystal UHD တီဗီများအား စတင်မိတ်ဆက် - MyBiz Myanmar
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ – စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် – ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် တီဗီထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၁၅ နှစ် ဆက်တိုက်ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် Samsung Electronics Co., Ltd သည် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးပေါ် တီဗီ အမျိုးအစားသစ်များ ဖြစ်သည့် အဆင့်မြှင့် တင်ထားသည့် UHD နှင့် Crystal UHD တီဗီများအား ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် Samsung သည် လှပသေသပ်သော ဒီဇိုင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Motion နည်းပညာ၊ နောက်ဆုံး‌ပေါ် ဘက်စုံသုံး မီဒီယာနှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ လွယ်ကူမြန်ဆန်သည့် ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စပီကာများနှင့် ဂိမ်းကစားမှု အတွေ့အကြုံများ ပါဝင်သည့် UHD (AU7000) နှင့် Crystal UHD (AU8000) မော်ဒယ်များအား မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သင်ကြားလေ့လာမှုများနှင့် နေအိမ်တွင် အပန်းဖြေအနားယူမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းပညာများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည့် Crystal UHD တီဗီတွင် ပိုမိုပြေပြစ်တောက်ပ‌သော၊ ပကတိတစ်ကယ့် ပြင်ပအရောင်များအတိုင်း ပြသပေးနိုင်စွမ်း ရှိသော Dynamic Crystal Color နည်းပညာအား ထည့်သွင်း‌ ပေးထားသည့်အပြင် Crystal Processor 4K လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိသည့်အတွက်လည်း ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစွာ ပုံရိပ် အလင်းအမှောင်များ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုများအား အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးသွားနိုင်စွမ်း ရှိမည် ဖြစ်သည်။
အခန်းနံရံပေါ်တွင် ကျနလှပစွာ တပ်ဆင်ထားနိုင်မည့် Crystal UHD တီဗီ၏ လှပသေသပ်ပါးလွှာလှသော Air-Slim ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ ဘေးဘောင် အနား ၃ ဖက် မရှိသယောင် ခံစားစေရမည့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသော 3-sided bezel less boundless မျက်နှာပြင်သည် ကြည့်ရှုသူများအား ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ကြည့်ရှုနေရသကဲ့သို့ ခံစားမှု အတွေ့အကြုံများအား ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြစ်သည့် Auto Low Latency Mode သည်လည်း မျက်နှာပြင်၏ resolution အား ကြည့်ရှုသည့်ပုံရိပ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု အရှိဆုံးဖြစ်စေရန် ထိန်းညှိပေးသွားမည် ဖြစ်သည့်အပြင် Q Symphony အသံစနစ်သည်လည်း ဂိမ်းကစားရာတွင် မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာ ကောင်းမွန်လှသော အသံထွက် စနစ်ကို ရရှိခံစားသွားစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
No. CRYSTAL UHD TV Model No. ဈေးနှုန်း (မြန်မာကျပ်)
1 55″ UHD 4K / Smart UA55AU8000KXMR 1,219,000
2 65″ UHD 4K / Smart UA65AU8000KXMR 1,639,000
3 75″ UHD 4K / Smart UA75AU8000KXMR 2,349,000
4 85″ UHD 4K / Smart UA85AU8000KXMR 3,609,000
No. UHD TV Model No. ဈေးနှုန်း (မြန်မာကျပ်)
5 43″ UHD 4K / Smart UA43AU7000KXMR 719,000
6 50″ UHD 4K / Smart UA50AU7000KXMR 949,000
7 55″ UHD 4K / Smart UA55AU7000KXMR 1,129,000
8 65″ UHD 4K / Smart UA65AU7000KXMR 1,449,000
9 75″ UHD 4K / Smart UA75AU7000KXMR 2,129,000
Samsung Electronics Co., Ltd. သည် အနာဂတ်ကို ဖော်ဆောင်ပုံသွင်းနိုင်ရန် စိတ်ကူးဉာဏ်များ၊ နည်းပညာများဖြင့်ပုံဖော်နေပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တီဗွီများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ Tablet များ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်သည့် နည်းပညာထုတ်ကုန်များ၊ Digital အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များ နှင့် ဖုန်းတွင်းမှတ်ဉာဏ်၊ LSI စနစ်၊ Foundry နှင့် LED solutions များကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။ ပိုမိုပြည့်စုံစွာသိရှိနိုင်ရန် နှင့် နောက်ဆုံးထွက် သတင်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် များကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် https://www.samsung.com.mm နှင့် http://news.samsung.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်သည်။
MyBiz Myanmar2021-09-16T01:10:50+06:30September 16th, 2021|Biz News|